(32094) 2000 KX32
(33102) 1997 YJ11
Ny 2000 JJ51 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2000 OZ9 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2000 OQ37 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2000 PK16 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 OE46 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 OH50 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 6120 P-L dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2234 T-1 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2367 T-3 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1975 ST1 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 1981 EN41 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1988 CR2 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1988 RB6 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 1993 TL13 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1994 BE4 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1994 XW dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroaniz ...
Ny 1995 QU3 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1995 ST48 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1996 RA2 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 1996 TF50 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1997 CE28 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 1997 MF4 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1997 UP22 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 1997 VJ dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroaniz ...
Ny 1997 WR11 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1997 XB dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fihi ...
Ny 1997 YZ4 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 1998 BP33 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 DF14 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 DL27 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 FY23 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 TE dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroaniz ...
Ny 1998 VV14 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 YU29 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1999 CS5 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1999 CH42 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1999 CH72 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1999 DZ5 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1999 DT7 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 1999 FX33 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 1999 GK20 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1999 JM45 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 1999 JV70 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1999 JN91 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1999 JG114 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 1999 JB136 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2000 EA50 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2000 FD22 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2000 GL65 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2000 GS123 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...